Max von Sydow ukufa - kudlalwa uJesu e George Stevens ngendoda yaseNazaretha
Le filimu kakhulu ezibizayo movie bible eyake yaba khona.
Hollywood umsebenzi wakhumula maphakathi nawo sika-60 lapho Max von Sydow bavumelana ukudlala indima kaJesu e George Stevens ngendoda yaseNazaretha.
Okuthusayo ifilimu I Ukusebenzela uZimu
Max von Sydow is for izindima eyaziwa kumafilimu ezifana Ingmar Bergman sika " amaSabatha Seal ", " I abathutha " futhi horror ifilimu " I Ukusebenzela uZimu ."
Anakho yabalingisi okuqinile ngemva kwakhe, omunye izindima zokugcina, wakhonza kuzo " Game of Thrones " njengoba Raven ezintathu uneso kanye " I-Star Wars: The Force ongenza " njengoba Lor San Tekka.
Hollywood umsebenzi wakhumula maphakathi nawo sika-60 lapho Max von Sydow bavumelana ukudlala indima kaJesu e George Stevens ' Indoda evela eNazaretha . "
Le filimu kakhulu ezibizayo movie bible eyake yaba khona. Nakuba-ke bavele kokubili ngetetsamelilwati baxgeki uqokelwe ezinhlanu Oscars kodwa won noyedwa.
Kwanhlanga zimuka nomoya Oscar
Max von Sydow ziyithole iyiphi Oscar emhlabeni ifilimu - futhi isanda okhethwe kabili.
Wayeneminyaka engu-90 ubudala.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 11:18